Tetikasa famerenam-bokatra amin'ny làlan-tsoratry ny làlan-tsambo, feno fandalinana amin'ny famerenana amin'ny beach
Lalana an-dalambato Street, Eel Pond Reap no Mahazo tombony amin'ny fandorana ny rano
Jolay 20, 2018
Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny fanondrahana any Edgartown, dia mahazo fatiantoka vaovao i Fuller Street Beach, ary ny mpiantsambo dia afaka manantena ny fandehanana azo antoka kokoa ao Eel Pond amin'ny lohataona.
Ny fasika mangatsiaka avy ao Eel Pond any Edgartown dia manampy amin'ny famenoana ilay làlana feno Fuller -Mark Lovewell
Tamin'ny tolakandro mamirapiratra tamin'ity herinandro ity, dia nisy seratra be dia be sy mpitsangantsangana indraindray izay nankafy ny tora-pasika, izay nasiana fantsona lehibe iray manodidina ny 3,500 tongotra avy ao anaty dobo, ary mifarana avaratr'i Edgartown Lighthouse ihany. Rivotra avy any avaratra no nanatsatoka ny fiparitahan'ny fako tamin'ny alàlan'ny fantsona sy ny fihorakorahan'ny mpitondra teo aloha.
Edgartown no hany tanàna ao amin'ny nosy manana programa feno dredge. - Mark Lovewell
Seagulls dia nivory tamina fantsona kely iray izay nifarana ilay fantsona, rehefa nivezivezy sy niverin-dàlana tany amin'ilay mpanamory teo anoloana i Mark DeFeo, namelatra fantsom-pasika nankany amin'ny lighthouse.
Hahazo tombony amin'ireo tompon'andraikitra am-polony maro ny tetikasa, miaraka amin'ireo olona mankafy ny tora-pasika mandritra ny taona. Ny zoma manaraka dia manamarika ny fahatongavan'ny flounder amin'ny ririnina ao anaty dobo sy ny andro farany ho an'ny lemaka.
Ny komity dredge Edgartown - hany andiany iray any amin'ny Nosy - no manapa-kevitra hoe aiza no hanao dredge isan-taona. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Gazette tamin'ity herinandro ity dia nanombatombana ny mpikambana ao amin'ny komity Dudley Levick fa ny manodidina ny kianjan'ny 4,000 dia nesorina tao anaty dobo ny faran'ny herinandro teo. Ny totalin'ny vola dia hohamarinin'ny fanadihadiana amin'ny lohataona.
"Betsaka fasika no nizotra tamin'ity morontsiraka ity ka nesoriny daholo ny fasika tamin'ny Fuller Street Beach," hoy i Charlie Blair, tompon'ny seranan'i Edgartown, mpiandraikitra ny komity. "Saika nihemotra niverin-dàlana indray." Ny fihetsiky ny fasika teo amoron-dranomasina dia niteraka fitifirana matevina tao Eel Pond ary nanomboka nanakaiky ny seranan-tsambon'ny atsimo-jiro.
Nanomboka tao amin'ny 1980 ny fandaharan'asa fanamorana ny tanàna rehefa nanapa-kevitra ny komity fa ny vidin'ny fikolokoloana tsy tapaka dia manamarina ny tanàna manana ny tenany manokana. Nanaiky ireo mpifidy, ary avy eo dia nankatoavana ny fividianana $ 400,000. Ny komity dredge dia manana teti-bola miasa isan-taona eo amin'ny $ 132,000.
Saripika avy amin'ny 1980 mampiseho ny tsangambato amoron-dranomasina Fuller, efa mandeha noho ny ranomasina. - Mark Lovewell
Edgartown koa no tanàna voalohany ao amin'ny Nosy nahazo fahazoan-dàlana feno fandefasana drakotra, izay mandrakotra ny toerana 17 izay notsongaina ho fikojakojana.
Voahosotra nandritra ny taona maro i Eel Pond, saingy ny tsodrano dia niha-miverina tsikelikely. Fihetsika be dia be noesorina indray tamin'ny taon-dasa, fa ny ririnina mafy kosa nanova ny ankamaroan'izany fivoarana izany. Tamin'ity taona ity, nanomboka nanomana aloha ny tanàna fa ny asa tsy afaka hanomboka hatramin'ny tapaky ny volana novambra mba hanaraka ny torolàlana ho an'ny fanjakana.
Ny toetr'andro maloto amin'ity taona ity dia mamela ny fandrosoana haingana eto amin'ilay toerana.
"Matetika dia very andro maro isika noho ny fitaovana be mangatsiaka ary nantsoinao izany," hoy Andriamatoa Blair. "Ny zavatra rehetra mety hitranga dia tsy mandeha amin'ny ririnina."
Mety mbola tsy nahatratra ny tanjony ny tetikasa fa mbola akaiky. "Handeha hatrany amin'ny farany isika," hoy Andriamatoa Levick. "Izay sisa tavela dia tsy ampy ho mendrika ny karama hiverina indray amin'ny herintaona." Azo inoana fa hanohy hamorona ilay tora-pasika vaovao ireo mpiasa aorian'ny faran'ny fe-potoana miasa ao anaty dobo.
Mandritra izany fotoana izany, ny komity dredge dia maneho hevitra izay tetikasa tadiavina amin'ny taona manaraka. Solon-trondro ao Edgartown, Paul Bagnall, izay mpanolotsaina ny komity, dia manantena fa hampifantoka ny sainy amin'i Cape Pogue amin'ny Chappaquiddick, izay ahafahan'ny tombony mihinana voromahery sy ny akorandriaka.
Dredging Eel Pond, fameloman-dranomasina ao amoron-dranomasina Fuller Street.
Edgartown dia nahazo $ 62,250 tamin'ny taon-dasa tamin'ny birao fitantanana ny Coastal Zone Management ho famerenana amin'ny laoniny lehibe eo amin'ny Fuller Street Beach, Lighthouse Beach ary Lighthouse Pond, fa ny tetikasa amin'izao fotoana izao dia rakotry ny vola ao an-tanàna.
Nisy lasy kely iray hafa niasa tamin'ity herinandro ity tao amin'ny Reniranon'i Edgartown Great Pond, nanadio ny fasika mba hanamorana ny fanimbana fanao isan-taona izay mamontsina ny kamory sy mampitombo ny sira ho an'ny fambolena fambolena. Roa taona lasa izay, ny ekipa sy ny Great Pond Foundation dia nikambana hanaisotra fihoaram-bositra nateraky ny Hurricane Sandy tao 2012.
Tao 2009 ary indray tao 2014, nanala fasika be dia be avy tao Sengekontacket Pond ny tanàna, fanatsarana ny fizahan-tany ary amidy ny tompon-trano tsy miankina ho an'ny fambolena amoron-dranomasina ao amin'ilay faritra. Fa ny dredging matetika dia tsy maintsy averimberina rehefa mandalo ny fihoranana sy ny fahamaotinana.
"Nahavita asa tsara tokoa izahay tany Sengie, saingy indrisy fa ho feno ny zavatra, ny tora-pasika dia hihosoka hatrany", hoy Andriamatoa Bagnall. "Mety hoe mpivady roa taona lasa izay, fa tsy hahagaga ahy ny hahita ilay dredge ho any indray."
Ny làlambe iray hafa dia manadio toerana ho an'ny fanoratana manodidina ny lalamben'i Harbour View taloha, eo andrefan'ny jiro ihany. Nilaza Andriamatoa Blair fa zato cubara monja no esorina amin'ilay toerana.
Nifarana tamin'ny Janoary Jan. 15 ny vanim-potoanan'ny faharetan-tanàna.
Source: Gazety voaloboka
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetikasan'ny famerenana amin'ny morontsiraka